2021 ရဲ့ လက်ကျန်နောက်ဆုံးနေ့လေးကို ရိုးရှင်းတဲ့ ဖက်ရှင်ေ လးနဲ့ပေါ့ပါး လွတ်လပ် စွာ ဖြတ်သန်း​ခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုး – Shwe Likes
2021 ရဲ့ လက်ကျန်နောက်ဆုံးနေ့လေးကို ရိုးရှင်းတဲ့ ဖက်ရှင်ေ လးနဲ့ပေါ့ပါး လွတ်လပ် စွာ ဖြတ်သန်း​ခဲ့တဲ့ မေမြတ်နိုး
Shwe | January 2, 2022 | Celebrity | No Comments
လက်ရှိ မြန်မာနို င်ငံရဲ့ဂု ဏ်ယူ ရဆုံး အလှမယ်မော် ဒယ်လ် တစ်ဦးဖြ စ်တဲ့ မေမြတ် နိုးကတော့ ထိပ်တန်း စူပါမော်ဒယ်လ်ေ တွထဲက တစ်ယော က်ဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိမှာ လည်းနို င်ငံခြားမှာ ပဲနေထိုင်ကာ အနုပညာ အလု ပ်တွေကို ပြုလုပ် လျက် ရှိတာပါ။
နိုင်ငံတ စ်ရပ်ခြားမှာ ရောက်ေ နပေမယ့်လည်း မြန်မာ နိုင်ငံရေး ကိစ္စအဝဝကို အမှန်တရား ဘက်က ရပ်တည်ပြီး သူမတတ်နိုင်တဲ့ ဘက် ကနေပါဝ င်ကူညီပေးနေ တာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
မေမြတ် နိုးက နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့အ ဆုံးဒီဇင်ဘာ လ၃၁ ရက်နေ့ newyear နေ့မှာတော့ ရိုးရှင်းတဲ့ဖက်ရှ င်နဲ့ပေါ့ပါးလွတ် လပ်စွာ ဖြတ်သ န်းပြီး” I ate too many poke bowls and shrimp pasta this year. Signing off 2021…”ဆိုတဲ့ စာေ လးနဲ့အတူ အပြင်ထွက်ကာ လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ပုံ ရိပ်လေးတွေကိုတ င်လာခဲ့ တာပါ။
ဘယ်လိုပဲ အဝတ် အစားပဲ ဝတ်ဆင်ြ ပီးနေနေ စမတ်ကျကာ ဆွဲဆောင်မှုရှိနေတဲ့ မေမြတ်နိုးရဲ့အလှကိုေ တာ့ပရိသ တ်တွေက ချစ်ခင်နှစ်သက်ေ နကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လက္ရွိ ျမန္မာနို င္ငံရဲ့ဂု ဏ္ယူ ရဆုံး အလွမယ္ေမာ္ ဒယ္လ္ တစ္ဦးၿဖ စ္တဲ့ ေမျမတ္ နိုးကေတာ့ ထိပ္တန္း စူပါေမာ္ဒယ္လ္ေ တြထဲက တစ္ေယာ က္ျဖစ္ၿပီး ယခုလက္ရွိမွာ လည္းနို င္ငံျခားမွာ ပဲေနထိုင္ကာ အႏုပညာ အလု ပ္ေတြကို ျပဳလုပ္ လ်က္ ရွိတာပါ။
နိုင္ငံတ စ္ရပ္ျခားမွာ ေရာက္ေ နေပမယ့္လည္း ျမန္မာ နိုင္ငံေရး ကိစၥအဝဝကို အမွန္တရား ဘက္က ရပ္တည္ၿပီး သူမတတ္နိုင္တဲ့ ဘက္ ကေနပါဝ င္ကူညီေပးေန တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။
ေမျမတ္ နိုးက ႏွစ္တစ္ႏွစ္ရဲ့အ ဆုံးဒီဇင္ဘာ လ၃၁ ရက္ေန႔ newyear ေန႔မွာေတာ့ ရိုးရွင္းတဲ့ဖက္ရွ င္နဲ႔ေပါ့ပါးလြတ္ လပ္စြာ ျဖတ္သ န္းၿပီး” I ate too many poke bowls and shrimp pasta this year. Signing off 2021…”ဆိုတဲ့ စာေ လးနဲ႔အတူ အျပင္ထြက္ကာ လည္ပတ္ခဲ့တဲ့ပုံ ရိပ္ေလးေတြကိုတ င္လာခဲ့ တာပါ။
ဘယ္လိုပဲ အဝတ္ အစားပဲ ဝတ္ဆင္ျ ပီးေနေန စမတ္က်ကာ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေနတဲ့ ေမျမတ္နိုးရဲ့အလွကိုေ တာ့ပရိသ တ္ေတြက ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေ နၾကတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
စိတ်ရောကိုယ်ပါနှစ်ပီး အားပေးနေတဲ့ပုရိဿတွေ ရဲ့ အသည်းကို အစိမ်းလိုက်ခွဲလိုက်တဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော် ရဲ့ ဗီဒီယိုလေး
သူမရဲ့ အခကြေးငွေပေးပြီး ကြည့်ရတဲ့ Exantria က အမိုက်စားပုံရိပ်တွေ အွန်လိုင်းပေါ်ပျံ့နှံ့လာတဲ့ အတွက် ပေါက်ကွဲနေတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ခင်ပွန်းဖြစ်သူရဲ့ခန္ဓာကိုယ် နဲ့ ပတ်သက်ပြီး လှောင်ပြောင်နေကြတဲ့သူတွေကို ပြင်းထန်တဲ့ သတိပေးစကားဆိုလိုက်တဲ့ သူထူးစံရဲ့ ဇနီးချောလေး ထိုက်ဆုဝင်း